जनतासँग जिस्किन्छ सरकार, हेल्लो सरकारको हाँसी मजाक यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
जनतासँग जिस्किन्छ सरकार, हेल्लो सरकारको हाँसी मजाक यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ…
काठमाडौँ। जनगुनासोहरुलाई सिंधै सरकार समक्ष पु¥याउने र सरकारी सेवा सुविधाहरुलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुरुवात गरेको हेल्लो सरकार पछिल्लो समय निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । यतिमात्र होइन मात्र होइन, आजभोलि हाँसी मजाक गर्ने थलो जस्तै बनेको छ ।
जनताको गुनासाको सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै जिस्केर बस्ने गरेको छ । फेसबुक ट्वीटर मार्फत जनताले गरेका गुनासामा हेल्लो सरकारले गैरजिम्मेबार रुपमा हाँसो मजाकका रुपमा जवाफ दिने गरेको अर्को गुनासो बढ्ने गरेको छ । शुरुवाती दिनमा केही प्रभाबकारी देखिएको भएपनि हेल्लो सरकार अहिले हाइहेल्लो हसिमजाक बन्दै गएको छ ।
इमेल, एसएमएस र टेलिफोनबाट गुनासो सुन्ने ब्यवस्था गरिएको हेल्लो सरकारको शुरु–शुरुमा हेल्लो सरकारप्रति पहुँच कम भएका नागरिकहरुको ठूलो अपेक्षा थियो । आफूले भोगेका पीरमर्का सिंधै सरकारलाई सुनाउन पाउँदा राहत हुने कुरा नागरिकहरुले सोचेका थिए । यसैले सामान्य समस्यादेखि जटिल समस्याहरु हेल्लो सरकारमा नागरिकहरुले धमाधम टिपाए सुनाए । केही सम्बोधन गरेको जस्तो पनि देखियो, शुरुका दिनहरुमा दिनमा कम्तिमा पनि ५ सय बढी गुनासा आउने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन । जनतालाई बिश्वास हराउँदै गएको छ भने हेल्लो सरकार पनि त्यसैगरी बिस्तारै प्रभाबहीन बन्दै गएको छ ।
यसैको उदाहरण हो यो नमुना
तर सरकारी अधिकारीहरु भने जनताका गुनासा र समस्याहरुको एथासक्य सम्बोधन भैरहेको दाबी गर्छन । तर हेल्लो सरकारको फेसबुक समेत झन्डै एक महिना देखि अपडेट छैन । – बिगुल न्यूजबाट साभार